Torohevitra famahana olana momba ny fandoavam-bola
Fa maninona no nolavina ny fandoavako vola? Torohevitra famahana olana
Izahay rehetra ny fandoavam-bola dia arahana amin'ny PayPal azo antoka vavahady fandoavam-bola. Mety misy antony maro samihafa tsy tokony handoavana ny fandoavam-bola.
Raha ny Nolavina ny volan'ny banky na ny carte de crédit, jereo raha toa ka:
Ny orinasan'ny karatra na bankinao dia manana fampahalalana bebe kokoa - Antsoy ny nomeraon-telefaona ao ambadiky ny carte de crédit na debit anao handalovan'ity fifanakalozana iraisam-pirenena ity. Ny bankinao na ny andrim-bolanao dia mahalala an'io olana iraisana io.
Nisafidy firenena mpanome karatra ianao - antoka fa nisafidy ny firenena marina ianao ao amin'ny fikandrana mandoa PayPal. Ohatra, raha navoakan'ny banky amerikana ny debit na carte de crédit anao dia tsy maintsy misafidy Etazonia ianao.
Ny karatrao dia lava na tsy misy daty - alao antoka fa mbola mitombina ny karatrao.
Tsy manana vola ampy ny karanao - alao antoka fa ny karanao dia manana vola ampy handoavana ny fifanakalozana.
Raha tsy misy amin'ireo voalaza etsy ambony ireo dia afaka mifanerasera aminay info@evisa-india.org.in